Guddoomiyihii G/Hiiraan oo ka soo horjeestay xil ka qaadis lagu sameeyay | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Guddoomiyihii G/Hiiraan oo ka soo horjeestay xil ka qaadis lagu sameeyay
Guddoomiyihii G/Hiiraan oo ka soo horjeestay xil ka qaadis lagu sameeyay
Guddoomiyihii Maamulka Gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale ee xilka qaadista lagu sameeyey ayaa kasoo horjeestaay xilka qaadistaas,isaga oo sheegay inay tahay mid Sharci darro ah,isla markaana Madaxweyne Waare uusan xilka ka qaadi karin.
Wareegto kasoo baxdey xafiiska Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxaa xilka guddoomiyaha gobolka Hiiraan xalay loogu Magacaabey markii Saddexaad Cali Jeyte Cismaan.
Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Baledweyne ayaa sheegay inuusan aqbaleyn xil ka qaadistaasi, maadaama Madaxweyne Waare uusan xilka ka qaadi karin.
Wuxuu sheegay inuu yahay Guddoomiyaha saxda ah ee Gobolka Hiiraan uuna ku sii shaqeyn doono Xafiiska, islamarkaana marnaba uusan aqbaleyn xil ka qaadista lagu sameeyay.
Hadalka Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan ayaa ku soo aadaya, iyadoo warqad ka soo baxday Xafiiska Madaxweyne waare xilka looga qaaday Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan.
Tani ayaa noqonaysa xiisad cusub oo ka taagan Gobolka Hiiraan ee Bartamaha Somaliya, iyadoo sidan oo kale Guddoomiyeyaal hore oo xilka looga qaaday ay diideen xil ka qaadistaasi, inkastoo markii dambe aqbaleen.